Isahluko 56 | IVANGELI LOKUFIKA KOMBUSO
Sengiqale ukuthatha isinyathelo sokujezisa labo abenza okubi, labo abaphethe amandla, kanye nalabo abashushisa amadodana kaNkulunkulu. Kusukela manje, noma ubani ophikisana Nami enhliziyweni yakhe, isandla sezinqumo Zami zokuphatha siyoba phezu kwakhe. Yazi lokhu! Lokhu kuyisiqalo sokwahlulela Kwami futhi akukho sihe esizoboniswa kunoma ubani futhi akakho ozophunyuka njengoba nginguNkulunkulu ongenamzwelo owenza ukulunga; kuzoba kuhle kini ukuba nikuqaphele lokhu.
Kuzo zonke izingxenye kufanele nikwazi ukubona lokho okwenziwa yisandla Sami nokuthi yimiphi imicabango enginayo enhliziyweni Yami—ingabe akuyona yonke eyenu? Ubani phakathi kwenu ongoWami? Ingabe uke wayihlola imicabango esenhliziyweni yakho noma amazwi owashoyo? Uke wawenza yini umzamo oqotho kulezi zinto? Udidekile ekhanda! Awuqotho! Awemukeli ukulawula koMoya oNgcwele! Bengilokhu ngikhuluma ngaphakathi kuwe ngokuphindaphindiwe, kodwa akukaze nhlobo kube khona ukusabela. Ungabe usaba yisiphukuphuku! Umsebenzi wakho ukubamba intando Yami futhi ngaphezu kwalokho kuyindlela okufanele ungene kuyo. Nonke nididekile, aninakho ukuqonda, anikuboni ngokucacile lokho engifuna ukukufeza kini, noma lokho engifuna ukukuzuza kini! Ukuze ubambe intando Yami kufanele okokuqala uqale ngokusondela Kimi futhi uhlanganyele ngokwengeziwe Nami. Uhlale uthi awukwazi ukubamba intando Yami; usuvele ugcwele izinto zakho, khona-ke ngingasebenza kanjani kuwe? Awukukhuthalele ukuza ngaphambi Kwami, kodwa umane ulinde ngombono ophambene. Ngithi ufana nesibungu, kodwa uzizwa woniwe futhi awukwamukeli lokho. Ngalesi sikhathi kufanele usukume futhi ubambisane Nami! Ungabi nombono ophambene! Lokho kuyobuyisela impilo yakho emuva. Ukukhuthala kuletha imihlomulo kuwe, hhayi kwabanye—ingabe awukakuqapheli futhi awukakuqondi lokhu? Intando Yami yembulwa njalo kuwe—ingabe awukayiboni? Kungani ungakaze uyamukele? Futhi kungani ungakaze uyibambe intando Yami? Ingabe ukubamba intando Yami akukuletheli buhle?